lon - Synonyms of lon | Antonyms of lon | Definition of lon | Example of lon | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for lon
Top 30 analogous words or synonyms for lon
ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ (၁၃၁) တိုင်းလုံ Tai-Lon
ဘကြည်၊ ဦး (ပန်းချီ) ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်အစိုးရ ပညာသင်ဆုရကာ ပါရီအမျိုးသား အဆင့်မြင့်ပန်းချီသိပ္ပံတွင် တစ်နှစ်ပညာသင်ခွင့် ရသည်။ ထိုသို့ ပညာဆည်းပူးနေစဉ် ကမ္ဘာ့ပန်းချီပြပွဲကြီး "Le Sa Lon 49" တွင် ဝင်ရောက်ပြသနိုင်ပြီး လန်ဒန်၊ မွန်တီကာလိုမြို့များတွင် ကျင်းပသည့် ပန်းချီပြပွဲကြီးများတွင်လည်း ပါဝင်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်အစိုးရ ပညာသင်ဆုရ၍ ဖီလာဒဲလ်ဖီးရား ပန်းချီအကယ်ဒမီတွင် တစ်နှစ် ပညာဆည်းပူးခွင့်ရခဲ့သည်။ ထိုနှစ်မှာပင် ပင်စီလ်ဗေးနီးယား တက္ကသိုလ်တွင် ပန်းချီမဟာဝိဇ္ဇာတန်း တက်ခွင့်ရခဲ့သည်။
တိုင်းလေ့လူမျိုး တိုင်းလေ့ ခေါ် လိရှမ်း (Tai-Lay) လူမျိုးများသည် အသားဝါ လူမျိုး မှ ဆင်းသက်လာပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့ကြသည့် ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ပြီး ရှမ်းကြီး၊ ဂုံရှမ်း၊ တိုင်းလွယ် တို့ နှင့် မျိုးနွယ်တူ ဖြစ်သည်။ လိရှမ်းလူမျိုးများသည် တရုတ်ပြည် အလယ်ပိုင်းတွင် နေထိုင်စဉ် "တိုင်း" ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြသော်လည်း နှစ်ရှည်လများ ကြာလာသောအခါ တိုင်းလေ့ ဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ အမှန်အားဖြင့် တစ်ချိန် က တိုင်းလွယ် (Tai-Loi)၊ တိုင်းလျမ် (Tai-Lem)၊ တိုင်းလုံ (Tai-Lon)တို့၏ ဌာနေမှာ ညီအစ်ကို (၃) ဦး အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် ချစ်ကြည်ရေး တိုင်းပြည်များဖြစ်သည့် ကျိုင်းတုံ၊ ကျိုင်းဟုန်း ၊ ကျိုင်းလဲမ်း တို့ ဖြစ်ကြသည်။ လိရှမ်း လူမျိုးများသည် ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်း ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်ရှိ မိုင်းလား၊ မိုင်းမ ဒေသ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ် နှင့် မိုင်းယောင်းမြို့နယ်များတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ၉၅% မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ စာပေ မှာ ဂုံရှမ်း စာပေ နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာများတွင် နေထိုင်သော လိရှမ်း လူမျိုးများသည် မိမိတို့၏ ရိုးရာ အဝတ်အထည်များကို ရက်လုပ်ကြသည်။ လိရှမ်း ရိုးရာဓလေ့မှာ ဂုံရှမ်း တို့နှင့် ဆင်တူပြီး ဝါဝင်ဝါထွက် နှစ်သစ်ကူး မှာလည်း ဂုံရှမ်းတို့ နှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ မျိုးနွယ်စု (၃၃)မျိုးတွင် (၁)မျိုး အပါအဝင်ဖြစ်သည်။
ကိုလေး၊ ဦး(ဇေယျာမောင်) စစ်ကိုင်းတောင်ရိုး သမိတ္တောဒယချောင် သီလရှင် ဆရာကြီး ဒေါ်မာလာရီနှင့် ဒေါ်ဉာဏစာရီ တို့ထံတွင် ကကြီး ခခွေးမှ သဒ္ဒါကြီး အထိ၊ ကြံခင်းချောင် ဆရာတော်ကြီး ဦးစိတြရာမ ထံ၌ သဒ္ဒါကြီး ရှစ်စောင်တွဲနှင့် သင်္ဂြိုဟ် ပါဋ္ဌ်များကို အသက် ၅ နှစ်မှ ၁ဝ နှစ်ကြား သင်ယူ ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အသက် ၁ဝ နှစ်တွင် အမျိုးသား ကျောင်းသို့ ပြောင်းသည်။ ထိုမှ စစ်ကိုင်းမြို့ အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်း၊ မန္တလေး ဥပစာ ကောလိပ်နှင့် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် တို့တွင် ပညာ သင်ကြား ခဲ့သည်။ သိပ္ပံဘွဲ့ကို ဓာတုဗေဒ ဂုဏ်ထူးဖြင့် ၁၉၃၄ ခုတွင် ရရှိသည်။ ၁၉၃၆ - ၄၂ တွင် အစိုးရ ပညာတော်သင် အဖြစ် လန်ဒန် တက္ကသိုလ်မှ M.Sc. (Lon), A.I.C; D.I.C. ဘွဲ့များ ရခဲ့သည်။ ၁၉၅ဝ နှင့် ၅၆ ခုနှစ် များတွင် အမေရိကန် နိုင်ငံ ကော်နဲလ် တက္ကသိုလ်နှင့် ကိုလံဘီယာ တက္ကသိုလ်တွင် တက္ကသိုလ်များ အုပ်ချုပ်ရေး ပညာရပ်များ အတွက် ဘွဲ့လွန် သင်တန်းများ တက်ခဲ့သည်။